﻿ ‘थलाहा खोलाको बाढी नै गढीको मुख्य समस्या हो’
‘थलाहा खोलाको बाढी नै गढीको मुख्य समस्या हो’
बिहीबार २३, साउन २०७६
सुनसरीको गढी गाउँपालिका कृषिमा अगाडी छ । ग्रामिण समुदायहरु रहेको यो गाउँपालिका विकासमा केही पछि परेको छ । गाउँपालिकामा धेरै समस्याहरु छन् । त्यसमध्ये प्रमुख दुई समस्या छन् । पहिलो थलाहा खोलाको डुबान अनि दोस्रो सुकुम्बासी समस्या । यी दुई समस्या समाधानको लागि माथिल्लो निकायसम्म पहल गरेपनि बजेट पाउन सकेको छैन । यीनै विषयहरुमा रहेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादवसँग न्यूजलयले गरेको कुराकानी :
अहिले गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
देशमा परिवर्तन आयो, संरचनाहरुमा परिवर्तन आयो । तर जनताको सोँच भने उस्तै । पुरानै शैलीमा जनता छन् । विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्यो, हल भित्रसम्म ठीक छ, बाहिर निस्केपछि उस्तै ।
हामी नयाँ सोँचका साथ राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाइरहेका छौं भन्छौं, तर शैली पुरानै छ । सरकार नै उस्तै छ । पारदर्शी छैन जनतासमक्ष । पन्चायतकालदेखि संघीयतासम्म पनि उस्तै छ । माथि नेताहरुको मन र दिमागमा मात्रै संघीयता छ ।
गाउँपालिकाको सवालमा महिला, दलित, पिछडा परेको वर्गका धेरै तिर समस्या छ । शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा धेरै समस्या छ । विस्तारै समाधान गर्दैछौं ।
गढी गाउँपालिकाको खास समस्या के हो ?
गढी गाउँपालिकालाई थलाहा खोलाले निकै ठूलो समस्या गरेको छ । भासी, इटहरी, मधेलीको सबैतिरका खोलाहरुको पानी थलाहामा मिसिएर बग्छ । साबिक औरावनीको ९, मधेलीको ४, ६, ७, ८, छिटाहाको ३ र ४ आदि लगभग सबै वार्डलाई खोलामा आएको बाढीले असर गर्छ ।
यो पटक २० घर त विस्थापित नै भए । उनीहरुलाई हामीले राहत दियौं । विस्थापित र बाढी प्रभावितहरुको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ ।
खोला नियन्त्रणको लागि केही पहल भएको छैन ?
पहल भएको छ । हामीले केन्द्रमा ५२ करोडको स्टीमेट गरेर पठाएका छौं । त्यती खर्च गर्ने हो भने थलाहा खोलालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर न प्रदेश न केन्द्रले पैसा दिएको छ ।
बरु प्रदेश सरकारले खोला नियन्त्रणको लागि व्यक्तिमार्फत् काम गराएको पाएको छु । प्रदेश सरकारले नेताहरुमार्फत् पैसा पठाएको रहेछ ।
गाउँपालिकालाई पठाएन, न लगत छ, न त समन्वय । अनावश्यक ठाउँमा खोला नियन्त्रण भनेर काम भइरहेको पाएँ । वडा नं. ६ र ३ मा प्रदेश सरकारको पैसा खर्च भइरहेको छ, तर अर्थहीन काम भएको छ ।
कसले ल्याएको रहेछ त त्यो बजेट ?
थाहा छैन । अब सरकार प्रमुखको हैसियतले मुख्यमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ । गाउँपालिकाको हरेक विषयमा म जवाफदेही भएजस्तै प्रदेश सरकारको लागि प्रदेश सरकार प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
हामीले गएको जेठमा भएको परिषद्मा पनि एकलौटी कामको जोडदार विरोध गर्यौं । तर प्रदेश सरकारले बजेट दिइरहेको छ, आफूखुसी खर्च भइरहेको छ ।
गुपचुप अनावश्यक काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ती त गाउँपालिकामा पनि होला नि ।
हामीसँग तराई मधेसको काम आएको थियो, तीन करोड ७० लाखको । हामीले जति काम गर्यौं, त्योभन्दा एक पैसा बढी न टेण्डरवालालाई न त उपभोक्तालाई नै दियौं । हामी पारदर्शी छौं । सबै हिसाब किताब वेवसाइटमा राखिदिएका छौं । तर प्रदेश सरकार र संघीय सरकार यत्तिको जवाफदेही छैन ।
गाउँपालिकाका अरु समस्या के छन् ? अब के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
गढीको मुख्य समस्या थलाहा खोलाको बाढी र सुकुम्बासी समस्या हो । गाउँपालिकाको २० प्रतिशत सुकुम्बासी छन् । उनीहरुलाई जग्गाको व्यवस्था गरेर क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लाने तयारीमा छौं । केन्द्रसँग पनि सहयोग मागिरहेका छौं ।
अरु खासै समस्या छैन । अब विकास भनेको विस्तारै विकास हुन्छ । धार्मिक वनलाई विकास गर्दैछौं । चिल्ड्रेन पार्क बनाउँदैछौं । गढीमा स्टेडियम पनि विकास गर्दैछौं । गढीको नामसँग जोडिएका मन्दिरहरुको पनि विकास गर्ने योजनामा छौं ।
‘इटहरी सरकारलाई काग्रेसको सहयोग छ, तर आफ्नै कारण पछि पर्दैछ’ : हेमकर्ण पौडेल (भिडियो अन्तर्वार्ता)
“विकास निर्माणको आधार नै सबैको सक्रिय सहभागिता हो,” : डेगराज
हरिनगरको समस्या सुनसरी खोला (भिडियो अन्तर्वार्ता)